MTS ka AVI - Olee otú iji tọghata MTS ka AVI na MTS ka AVI Ntụgharị
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata MTS ka AVI
Olee otú iji tọghata MTS ka AVI
1.1 Gịnị bụ MTS File
1.2 MTS Ntụgharị
1.3 Online MTS Ntụgharị
1.4 MTS ka MP4
1.5 MTS ka AVI
1.6 MTS ka MOV
1.7 MTS ka DVD
1.8 MTS ka WMV
1.9 MTS ka mpg
1.10 MTS ka MKV
1.11 MTS ka WAV
1,12 MTS ka DV
1,13 MTS ka VOB
1,14 MTS ka FLV
1,15 MTS ka 3GP
Ma gụọ 2.3 Play MTS na VLC
3.1 MTS na breeki aka
3.2 Naghachi MTS Video
3.3 Import MTS ka Final Cut Pro
3.5 Aiseesoft ọzọ
Ị dị nnọọ wee azụ a ezumike, ngụsị akwụkwọ ma ọ bụ ọzọ? Agaghị ị chọrọ ikere òkè onye obi ụtọ oge nke ahụ na-dere na gị camcorder, online na ezinụlọ ma ọ bụ enyi? Ma ọ bụ ị ga-achọ mbubata mkpachị ka a video edezi n'elu ikpo okwu na nanị na-akwado ndị AVI faịlụ Ọkpụkpọ? A nkuzi ga-eduzi gị na otú iji tọghata ndị MTS faịlụ na AVI na a ọkachamara ma mfe na-eji video Ntụgharị.
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata otu MTS ka AVI
Part 2: Free MTS ka AVI Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online MTS ka AVI Ntụgharị
Nkebi nke 4: Extended Knowlege maka MTS na AVI
Part 1: Best MTS ka AVI Video Ntụgharị
Na-akwado AVCHD faịlụ extensions dị ka MTS nakwa dị ka M2TS.
Bulite faịlụ kpọmkwem site camcorder.
Ultra-ngwa-ngwa akakabarede ruo 30 ugboro.
Editor dị na otu n'elu ikpo okwu.
Olee otú iji tọghata otu MTS ka AVI
Biko soro site si Nzọụkwụ otu maka a kpọmkwem akakabarede site na AVI ka VOB faịlụ Ọkpụkpọ. Alternatively, Ikwu Nzọụkwụ 3 n'ihi na-ere ọkụ gị AVI faịlụ n'ime a DVD.
1. Bulite MTS faịlụ (jikọọ camcorder ka PC)
Jikọọ HD video igwefoto ma ọ bụ camcorder gị PC na eriri USB. Ozugbo ejikọrọ na kwadoro na, na camcorder ga-akpaghị aka na-egosi na desktọọpụ. Ọ bụ na-achọsi ike na ị idetuo videos gị PC si ike mbanye tupu converting ma ọ bụ edezi ha. Pịa Tinye faịlụ na-agagharị maka faịlụ na ịgbakwunye MTS faịlụ na ị chọrọ iji tọghata jidesie usoro ihe omume. Na n'elu nke, ogbe akakabarede na-akwado site na nke a MTS video Ntụgharị, otú i nwere ike bulite ọtụtụ MTS faịlụ na n'otu oge.
2. Dezie MTS faịlụ na otu software
Nke a MTS Video Ntụgharị pụrụ inyere gị aka ewepụtụ, bugharia na akuku video. E nwekwara ndị ọzọ na atụmatụ-enyere gị aka tinye mmetụta, watermarks, sobtaitel na ọbụna jikota multiple faịlụ n'ime otu otu faịlụ n'ihu akakabarede.
3. Hazie mmepụta ntọala
Mgbe ahụ, ị nwere ike họrọ ihe mmepụta usoro maka akakabarede na ezipụta a ndekọ (na kọmputa gị) ka ebe ị na-amasị ịzọpụta mmepụta faịlụ. Nke a Video Converter Ultimate akwado keukwu outpu video formats gụnyere AVI, MPEG, WMV, MP4, MOV, XviD, 3GP, FLV na ọtụtụ ndị ọzọ. Nanị pịa tọghata bọtịnụ iji malite ntọghata na mgbe ahụ ka ọ na-arụ ọrụ.
The Ntụgharị emewo m ubé n'elu 25 nkeji na 700 MTS vidiyo na ukwu ezi mma. Otú ọ dị, akakabarede ọsọ mgbe na-adabere na mbụ video saịtị na gị PC nhazi. Ọ bụ ezie na converted video na-adịghị aga na-yiri ka mbụ otu (HD video), àgwà ga-izute kasị ọrụ mkpa.
Part 2: More nhọrọ: Free MTS ka AVI Ntụgharị, Online MTS ka AVI Ntụgharị
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free MTS ka AVI Ntụgharị
Kama AVI, ị nwere ike-ahọrọ mgbe nile ọzọ kachasị presets ona playbacks on gị họọrọ oke ma ọ bụ obere ngwaọrụ.
Pro: Gịnị ka ọ na-eri? Ihe ọ bụla!
1. Edezi ọrụ na-adịchaghị.
2. Enweghị ike ma ọ bụ mee onwe DVD.
3. Ọ dịghị nkwado na-ewepụta metadata.
Nkebi nke 3: Online WMA ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 4: Na ihe ọmụma n'ihi na MTS na AVI Format
MTS bụ ndọtị na-na-ejikarị maka na ịchekwa elu definition videos dere na DVD ma ọ bụ AVCHD camcorders. AVI bụ a multimedia akpa na e dere ma ọdịyo na video data. Ọ na-ekwe synchronous audio-na-video playback. AVI faịlụ akwado multiple gụgharia ọdịyo na video
Dị iche iche Cyberlink Players
Sony Foto dị Motion Nchọgharị Windows Media Player
Ihe ọmụma zuru ezu na MTS faịlụ Ọkpụkpọ
Olee Ọkụ AVI ka DVD on Windows 8
Top 3 AVI Players maka Mac Ihe ọmụma zuru ezu na AVI faịlụ Ọkpụkpọ
Top 3 AVI Players maka Mac
Olee otú iji tọghata MTS ka FLV